About Diamond Earrings, Fakes, and Cheeks – အတ္တကျော်ရဲ့ စာပေါင်းစုံ
Author lettwebawPosted on 15 June 2010 18 October 2010 Categories Reproduction, Thoughts
6 thoughts on “About Diamond Earrings, Fakes, and Cheeks”
Thanks for this article,Saya.
precious for life !
မိုး Ma Ma Lwin says:
15 June 2010 at 10:07 am
အရမ်းကောင်းတဲ့ စာစုလေးတွေပါပဲ..ဆရာစာအုပ်လေးတွေ ဖတ်ပြီးတိုင်း အမြဲအတွေးလေးတွေရပါတယ် …ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်…
15 June 2010 at 10:46 am
လူတိုင်းကတော့ စိန်နားကပ်ဖြစ်ချင်မှာပါပဲး)
15 June 2010 at 10:47 pm
ကျွန်တော်က စိန်နားကပ်လား၊ စိန်တုလား၊ ပါးလား…..
စိန်နားကပ်တော့ ဖြစ်ချင်တာပဲဗျ….။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို အားမနာတမ်း သုံးသပ်လိုက်ဦးမယ်ဗျာ… ဘာလည်းဆိုတာ။
အဲ..ဒါနဲ့ ဆရာရော်…စိန်နားကပ်လား၊ စိန်တုလား၊ ပါးလား ခင်ဗျာ..။
8 July 2010 at 3:04 pm
Allow me to share it on FB. Thank you Saya 🙂
8 July 2010 at 5:38 pm
Please feel free to do so, Mr. ASD. I should also thank you!
Next Next post: Demands of the Burmese Society on Burmese Women